Didier Drogba Oo Markiisii Ugu Horeysey Ka Hadlay Sababta Uu Koobka Ugu Geeyey Ibrahimovic Markii Ay Ku Guuleysteen Championka - jornalizem
Didier Drogba Oo Markiisii Ugu Horeysey Ka Hadlay Sababta Uu Koobka Ugu Geeyey Ibrahimovic Markii Ay Ku Guuleysteen Championka
Weeraryahankii hore ee Chelsea Didier Drogba ayaa markii ugu horeysey waxa uu ka hadlay sidii niyada ahayd ee uu ula qeybsaday farxada Roman Ibramovich guushii koobka championka.
Kooxda Chelsea ayaa waxa ay Arbacada bilaabaysaa sidii ay u difaacan lahayd koobka iyadoo kulanka ugu horeysa la ciyaareyso Juventus afar bilood kadib markii uu Drogba u dhaliyey goolkii sababay guusha koobka horyaalka Yurub.
Waxay ahayd darbadiisii ugu dambaysay ee rigooradii uu dhaliyey tan sababtay guusha Chelsea waxana uu sharaxaad ka bixiyey sababta uu koobka uu si toos ah ugu geeyey milkiilaha Chelsea Abrmovich markii uu koobka gacantiisa soo galay.
Drogba ayaa yiri : “Sanad walba waan wada sheekeysan jirney.
“Sanadkan waxa uu yiri Ma ku guuleysanaynaa Champions League mise?’waxaan ku iri ma garanayo, toddobaad kahor ciyaartii finalka ayaan mar kale wadahadalnay waxana aan ku iri haa markaan waa waqtigeena .”
Drogba waxa uu dhaliyey goolkii barbaraha ahaa ee Bayern Munich kadibna rigoore ayaa waxaa ka badbaadiyey Petr Cech Arjen Robben.
Labada laacib ee halyeeyga u ahaa Chelsea garoonka Allianz Arena ayaa horkacayay dabaaldegga kadib markii ay tuurashada rigoorada soo dhamaatay.
“Waa inaan isaga u tagaa, ayaan iri , waxaan ku iri waad mahadsan tahay waxana aan si wada jir ah u wada dhahnay waan guuleysanay,”